အဆိုပါဥပဒေ (ဘာသာရေး / ကိုယ်ပိုင်သတ္တိ) ကပြ
သငျသညျယရှေုကိုယုံကြည်သည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဘဝတွေကိုသင်သည်မှတဆင့်စီးဆင်းမည်ဖြစ်သည်များနှင့်ဘဝကျွန်တော်တို့ကို ပို. ပင်ပညတ္တိကျမ်းတောင်းဆိုချက်များထက်လုပ်ပေးစေသည်။ တစ်ဦးအပေါများဘဝရှိပါသည်။
အဆိုပါဥပဒေ (ဘာသာရေး / ကိုယ်ပိုင်သတ္တိ) ကပြောပါတယ် - လုပ်ပါ။ ယရှေုက - ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
(ကျွန်တော်တစ်ဦးအနေဖြင့်အားလုံးကိုအတူတကွပြုလုပ်ထားရန်စီမံခန့်ခွဲသည့်အခါက) ဥပဒေ, ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်သတ္တိဂုဏ်ယူကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သို့သော်ယေရှုအပေါငျးတို့သညျဘုနျးပေးကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း။ ကျနော်တို့ကကျေးဇူးတင်နှင့်နှိမ့်ချဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာရေးကလူနှစ်ဦးစလုံး (တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သော) ကိုအများဆုံးဂုဏ်ယူဖြစ်ကြပြီး (သူတို့အတိုလဲသေကြပြီအခါ) အများဆုံးစိတ်ကျရောဂါ။ ထိုအခါပြဇာတ်ရုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကူးသွားကြပြီတဲ့သူကဘာသာရေးလျှို့ဝှက်လည်းရှိသေး၏။ သို့သော်တစ်ဦးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. လူကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူမ၏ချစ်သူတို့ယေရှုနောက်တော်လိုက်ချင်တယ်။
ရောမ 10: 2-4 "ငါသူတို့ဘုရားသခင်အဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်သောသက်သေခံ, ဒါပေမယ့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကင်းမဲ့နိုင်ပါတယ်များအတွက်မိမိတို့ဖြောင့်မတ်တည်ထောင်ရန်နှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ဖြောင့်မတ်ဖို့လက်အောက်ခံရှိသည်မဟုတ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲ, ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်နားမလည်ဘူးသည်ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံသည်။ ။ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားပေါင်တို့ဖြောင့်မတ်ပါ။ "
သငျသညျယရှေုကိုယုံကြည်သည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဘဝတွေကိုသင်သည်မှတဆင့်စီးဆင်းမည်ဖြစ်သည်များနှင့်ဘဝကျွန်တော်တို့ကို ပို. ပင်ပညတ္တိကျမ်းတောင်းဆိုချက်များထက်လုပ်ပေးစေသည်။ တစ်ဦးအပေါများဘဝရှိပါသည်။ ယရှေုသညျအားနည်းသည်မဟုတ်, သန်စွမ်းခြင်းနှင့်အသက်တာကိုအပြည့်အဝ။ ပိုကောင်းကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူနှင့်သူ့ကိုပဲ့ကျော်ကိုယူပါစေသောအခါအဘို့သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအပေါ်သူ၏အမှတ်အသားကိုထည့်လေ့မရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဆုံးရှုံးပြီးစက်ရုပ်ဖြစ်လာပါဘူး။ ယင်းအစားငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုရှာဖွေယခုယေရှုနှင့်အတူရှေ့သို့လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တော့ဘူးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာပွင့်လင်း Leave! သငျသညျယခုယေရှုနှင့်အတူအားလုံးအပြီးနေထိုင်နေကြရသည်။ ယေရှုနဲ့အတူဘဝကိုအပြစ်တရားအန်ဖတ်နှင့်အမှိုက်ပြန်သွားကြဖို့လည်းကောင်းလှ၏။
2Pe 2:22: "ဒါပေမယ့်ကပြောနေဒါစစ်မှန်တဲ့စကားပုံအဖြစ်သူတို့ရှိရာသို့ဖြစ်ပျက်နေသည်: ယင်း၏အန်ဖတ်မှတစ်ဦးခွေးပြန်နှင့်ရွံ့အတွက်လူးမှဆေးကြော။ "
အစားယေရှုနဲ့အတူသင့်ရဲ့လမ်းလျှောက် Continue နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူမျှဝေပါ။ ယရှေုသညျအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။